Boliska Dalka Canada oo ku soo baraarugay Falkii is qarxinta ee Muqdisho – idalenews.com
Hay’adaha Ammaanka Dalka Canada, ayaa baaritaan ku haya wararka sheegaya in ugu yaraan Muwaadin Somali-Canadian ah uu Hoggaaminayay Naftood ha ligayaashii ka tirsanaa Kooxda Alshabaab ee dhawaan Falka ismiidaaminta ka geystay Magaaladda Muqdisho.
Saddax Alifle Greg Cox oo u hadlay The Royal Canadian Mounted Police, ayaa sheegay iney ka shaqeynayaan sidii ay u Uruurin lahaayeen Warbixinada la xiriira is qarxintaas, wuxuuna intaa ku daray inay iskaashi la wadaan Hay’addaha Ammaanka ee Caalamka.
Saddax Alifle Greg Cox, waxa uu ka gaabsaday inuu Faahfaahin ka bixiyo wararka warbaahinta shaaciyeen ee ku saabsan in Muwaadiniin Somali-Canadian ku lug lahaayeen Falalkii is qarxineed ee ka dhacay Muqdisho.
Wargeyska Maalin laha ee Toronto Star, ayaa qortay inay dembi baarayaashaSoomaalida diirada ku hayaan is qarxiye Mahdi Cali Dhoore oo ah Muwaadin Somali-Canadian, kaasi oo la rumeysan yahay inuu ka mid ahaa Naftood haligayaashii geystay Qaraxii ka dhacay Magaaladda Muqdisho.
Dhinaca kale, Wargeyska The National Post, ee ka soo baxa Dalka Canada, ayaa ka soo xigtay mid ka mid ah Qurba joogta Soomaalida ee ku nool Toronto inuu Mahad Cali Dhoore ku geeriyooday Is qarxintaas.
Is qarxiyahaas oo 25-Jir ahaa ayaa waxa uu kooxda Alshabaab ku soo biiray 2009, kadib markii u saaqiday Waxbarashadiisa Jaamacadeed.